မလေးရှားမှာ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပေးရင် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက် ရပြီတဲ့လား | My Diary
← Ka Nu Zuau Gen Kammal 8	စင်ကာပူသို့ အလုပ်လုပ်ရန် သွားမည့်သူများ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ် အမျိုးအစားစိစစ်ပြီးမှ သွားသင့် →	မလေးရှားမှာ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပေးရင် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက် ရပြီတဲ့လား	Jan 2
အဲဒီမှာ စတော့တာပဲ။လာလိုက်တဲ့ဖုန်းက တခုမှ အချိုးမပြေ။ဒီကြားထဲ သူတို့က ဖုန်းစပီကာဖွင့်ပြောတော့ အကုန်ကြားနေရတော့တာပဲ။တစ်ယောက်ကဆိုရင် ညီမလေး အခု( ၀ )သွားတော့ အဆင်မပြေဘူး မဟုတ်လား။ အကို့ဆီ လာနေပါလား။ဒါပေမဲ့ လာမယ်ဆိုရင် မြန်မြန်လာပါ။( ၂၀ )ရက်နေ့အထိပဲ စောင့်နိုင်မယ် ( ၂၀ )ရက်နေ့မှ မလာဘူးဆိုရင် တခြားကောင်မလေးတစ်ယောက် ကိုပဲ ခေါ်လိုက်တော့မယ်တဲ့။ကြည့်ပါဦး ပြောပုံကို။ နောက်တစ်ယောက်ဆိုရင် ( သူက ဖုန်းဝယ်ပေးထားတဲ့သူပါ ) ညီမ အခုဘယ်မှာလဲ လာခေါ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ကောင်မလေးက အဲဒီလူကို သိပ်မကြည်ဘူး ထင်ပါတယ် အခုရောက်နေတဲ့နေရာကို မသိဘူးပဲ ခံငြင်းတာ။အဲဒါနဲ့ အဲဒီလူက ညီမ မသိရင်လည်း အိမ်ရှင် အစ်မကို ပေးလိုက်ပါတဲ့။အဲဒီညီမက အစ်မ မပြောနဲ့နော်ဆိုပြီး ခေါင်းတခါခါ လက်တခါခါနဲ့ ကျွန်မဆီကို ဖုန်းအတင်းထိုးပေးပါတယ်။ကျွန်မလည်း မပြောဘူး။ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ လိပ်စာအတိအကျ မပြောတတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီမှာ အဲဒီအကောင်က ကျွန်မကို ဘာပြောတယ်ထင်လဲ။အစ်မပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ ကျွန်တော့်ဆီက ဖုန်းတော့ယူပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရှောင်နေလို့ရမလားဗျ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော့်လူ ဖြစ်သွားပြီပဲ တဲ့။တောက် ဒီ……………………. စိတ်ထဲမှာတော့လေ ကောင်းချီးပေးလိုက်တာ စုံသွားတာပဲ။အပြင်မှာတော့ ဘာမှပြောတော့ပါဘူး။ ဖုန်းပဲချလိုက်တယ်။
ဖုန်းချပြီးတော့ ဟဲ့ နင်တို့လူက မလွယ်ပါလား။သူ့ဖုန်းပြန်သာပေးလိုက်ပါတော့လား ဆိုတော့ မပေးနိုင်သေးပါဘူး ဖုန်းတစ်လုံးနည်းတာမှတ်လို့ သူတို့ဝယ်ပေးတော့ ကိုယ်ဖုန်းဝယ်မယ့် ပိုက်ဆံကို မြန်မာပြည် ပို့လို့ရတာပေါ့တဲ့။ ဒါပေမဲ့ နင်တို့လူက သားပြောမယားပြော ပြောနေတာလေ ဆိုတော့ အစ်မရယ် အခုရှောင်နေလိုက်ရင် ပြီးတာပဲ သူဘာတတ်နိုင်တာမှတ်လို့ မလေးရှားမှာက ဒီလိုပါပဲ ညီမတို့ ရောက်ခါစကဆို အဲဒီလိုပဲ လူတစ်ယောက် ဖုန်းဝယ်ပေးပြီးတော့ အဖြေအတင်းတောင်းတာ ညီမကလဲ စဉ်းစားဦးမယ်ချည်း ပြောတာ (၁၀)ရက်လောက်ကြာတော့ ငါ့မကြိုက်နိုင်ရင်လည်း ဖုန်းပြန်ပေးဆိုပြီး ပြန်ယူသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ ညီမကလည်း မမှု့ပါဘူး။ဖုန်းဝယ်ပေးချင်တဲ့လူတွေများ တန်းစီနေတာပဲ။ညီမပြောနဲ့ ဟိုအစ်မ မှာတောင် ၀ယ်ပေးချ့င်တဲ့လူတွေ အများကြီးဆိုပြီး အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ တစ်ယောက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ကျွန်မက ဟဲ့နင်အိမ်ထောင်ရှိတာ ပြောမပြဘူးလားဆိုတော့ ပြောပြတယ် ကလေးဓာတ်ပုံတောင် ထုတ်ပြသေးတယ်တဲ့ သူတို့က မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ စိတ်မ၀င်စားဘူး အစ်မကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပဲ။ငါလဲ ( မရိုမသေစကား ) ငါ့ကိုယ် မပါသွားရင်ပြီးတာပဲ ဆိုပြီး အလိုက်သင့်နေ နေရတယ်။ ဒီရောက်မှ ငါ့လဲ စန်းတွေပွင့်နေလိုက်တာများ အံ့တောင်သြတယ်တဲ့။ သူပြောတာ ကြားရတော့ ဟိုတလောက အင်တာနက်မှာ ဖတ်လိုက်ရတာလေး သွားသတိရပါတယ်။ရေးတဲ့လူနာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေလည်း မလေးရှားရောက်မှ ငါ အရမ်းစန်းပွင့်နေပါလား လို့ မထင်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ စာသားလေးပါ။
အခုတော့ မြန်မာမိန်းကလေးဆိုရင် ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းသာမက တခြားလူမျိုးတွေကပါ စော်ကားချင်လာကြပြီ။ မြန်မာအမျိုးသားတွေကလည်း မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို နှမချင်းစာနာပြီးတော့ (တချို့ကပြောပါတယ်။သူတို့မှာ နှမ မရှိပါဘူးတဲ့။နှမ မရှိရင်တောင်မှ အမေဖြစ်ဖြစ် အဒေါ်ဖြစ်ဖြစ် တူမဖြစ်ဖြစ် ဆွေမျိုးသားချင်းထဲကပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံး သံယောဇဉ် တွယ်ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတော့ ရှိမှာပဲ)ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ စာနာပေးကြပါ။မိန်းကလေးတွေကလည်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစိတ်လေး မြှင့်တင်ပေးကြပါ။ငါဒီမှာ ဘာလုပ်လုပ် မြန်မာပြည်က ဘယ်သူမှသိမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ထင်ရာမစိုင်းလိုက်ကြပါနဲ့။နောင်တစ်ချိန်ကျရင် နောင်တရပြီး စိတ်ဆင်းရဲရမှာကို စိုးရိမ်လို့ပါ။
ဒါမျိုးအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကယ့်ကို ရင်မောပါတယ်။ ဟိုတလောက အင်တာနက်မှာ ပြည်ပမှ သူရဲကောင်းများဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာသားလေးကို လူတော်တော်များများ ဖတ်လိုက်ရမှာပါ။ မိဝေးဖဝေး ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ ဝေးပြီးတော့ စားဝတ်နေရေးအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ စွန့်စွန့်စားစား ငွေရှာနေရတဲ့ ပြည်ပက အလုပ်သမားတွေ အားလုံးဟာ သူရဲကောင်းတွေတဲ့။ဘာပဲပြောပြောပေါ့လေ အားလုံးဟာ တမျိုးမဟုတ် တမျိုးတော့ အခက်အခဲရှိကြပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်မိဘ ကိုယ့်ဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဝေးပြီး ရေခြားမြေခြားကို ရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း ရေနစ်သူကို ၀ါးကူထိုးတာမျိုး မလုပ်ဘဲနဲ့ ဖေးဖေးမမ စာစာနာနာနဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ကြမယ်ဆိုရင် ယုံကြည်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးဆိုရင် ဘယ်သူက နှိမ့်ချရဲမှာလဲ။စော်ကား ရဲမှာလဲ။
Posted on January 2, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng and tagged ရည်းစား, Hnadphone, Malaysia. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← Ka Nu Zuau Gen Kammal 8	စင်ကာပူသို့ အလုပ်လုပ်ရန် သွားမည့်သူများ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ် အမျိုးအစားစိစစ်ပြီးမှ သွားသင့် →	Leaveacomment